Mapisarema 53 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kumutungamiriri; mutinhimira weMaharati.* Maskiri.* Rwiyo rwaDhavhidhi. 53 Benzi rinoti mumwoyo maro:* “Jehovha haako.”+ Zviito zvavo zvisina kururama zvakaipa uye zvinosemesa;Hapana ari kuita zvakanaka.+ 2 Asi Mwari anotarisa vanakomana vevanhu ari kudenga+Kuti aone kana paine munhu ane njere, kana paine munhu ari kutsvaga Jehovha.+ 3 Vese vakatsauka;Vese vanongova neuori. Hapana ari kuita zvakanaka,Kana mumwe chete zvake.+ 4 Hapana kana anonzwisisa here pavanhu vanoita zvakaipa? Vanodya vanhu vangu sekunge vari kudya chingwa. Havadani kuna Jehovha.+ 5 Asi vachabatwa nekutya kukuru,Kutya kwavasati vamboita,*Nekuti Mwari achaparadzira mapfupa evaya vari kukurwisa. Uchavanyadzisa, nekuti Jehovha avaramba. 6 Dai ruponeso rwaIsraeri rwabva muZiyoni!+ Jehovha paanodzosa vanhu vake vakatapwa,Jakobho ngaafare, Israeri ngaapemberere.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Vachatya pasina chekutya.”